Ny teknolojia kamiao dia nanakana ny fanafihana tao Berlin tsy hihoson-dra | Vaovao momba ny gadget
Ny teknolojian'ilay kamio dia nanakana ny fanafihana tao Berlin tsy hihosin-dra kokoa
Manohy manao bingo miaraka amin'ny fampiharana ny teknolojia fisorohana sy ny fiara mitondra fiara mizaka tena isika, amin'ity indray mitoraka ity dia misy ifandraisany amin'ny fanafihana any Berlin, renivohitr'i Alemana, izay namoy ny ainy tsy latsaky ny roa ambin'ny folo ary maratra maro. Betsaka ireo niharam-boina izay mety ho avo kokoa raha tsy noho ny rafitra fijanonan'ny fiara tsy miankina izay nampandeha ny freins automatique. Izany no vokatry ny fanadihadiana farany natao momba ny fanafihana, ny antony farany nanampy hanombohana hiantehitra bebe kokoa amin'ny fampiharana ny fepetra fisorohana sy ny fitondrana fiara mizaka tena amin'ny fiara rehetra.
Ny fanadihadiana voalohany ary niparitaka tamin'ny haino aman-jery dia nanondro ny fahaizan'ny mpamily poloney niady tamin'ny mpampihorohoro tamin'ny fikasana hisoroka ny vono olona. Na izany aza, toa tsy vonona hanohitra ny haino aman-jery izy izao (mampahafantatra antsika Gizmodo) milaza an'izany ny rafitra Scaking automatique marika Scania no tena izy, ary izany ve no voalohany dia mamoaka fampandrenesana feo ary rehefa nandeha teo anelanelan'ny fitopolo sy valopolo metatra dia nijanona ho azy ny kamio, ka nanalavitra ny famonoana ho lehibe kokoa.
Ao Nice, mampiasa fomba fanafihana mitovy amin'izany, miaraka amin'ny kamio tsy manana an'ity karazana teknolojia ity, ka mamokatra ny famonoana olona tsy manan-tsiny tsy latsaky ny valopolo. Ity rafitra fanamafisam-peo mandeha ho azy ity dia tsy maintsy atao amin'ny 2012 ho an'ny fiara mavesatra rehetra izay mivezivezy ao amin'ny Vondrona eropeana nanomboka tamin'ny 2012, fitsipika iray nitarina nifandimby tany Etazonia, ohatra mazava fa tsy ny mpanjifa ihany no tokony hifidy amin'ny alàlan'ny teknolojia amin'ny fitondrana fiara, fa koa avy amin'ny manampahefana, miaro ny fiarovana ny mpandeha an-tongotra sy ny mpamily rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Ny teknolojian'ilay kamio dia nanakana ny fanafihana tao Berlin tsy hihosin-dra kokoa
Uber dia horaisina ho Taxi manoloana ny famerana ny fivezivezena ao Madrid
Periscope dia efa mamela ny mpampiasa azy handefa mivantana amin'ny 360º